पर्यावरण नारी पृष्ठ 1
acacia फूल - निको गुण
समेत 1859 मा, यो कालो locust को रंग गुण निको छ ज्ञात, र यो धेरै सक्रिय निश्चित रोगहरु को उपचार मा प्रयोग भए भए। हालैका वर्षहरूमा, अधिक र अधिक मानिसहरू हाम्रो हजुरआमा को विधि फर्केपछि, परम्परागत चिकित्सा देखि मदत माग्न शुरू छन्। ध्यान बिना रहन र आफ्नो रूख मा सुगन्धित फूल umopomrachayusche छैन। ठीक तल छलफल, acacia फूल को गुण निको, र कसरी वैकल्पिक चिकित्सा मा सही तिनीहरूलाई लागू गर्न छ के। acacia फूल को औषधीय गुण acacia को फूल निम्न पदार्थ समावेश: जैविक एसिड जस्तै;
Kuvelerova गर्भाशय - यो uterine मांसपेशिहरु मा मारा placenta को कमजोर बनाइरहेका र रगत को एक परिणाम रूपमा आक्रान्त को विकास संग सम्बन्धित गर्भवती महिला गरेको लक्षण जटिल को जीवन खतरा प्रतिनिधित्व । विज्ञान यस प्रकार 0,5-1,5% को एक आवृत्ति संग हुन्छ। couvelaire गर्भाशय पनि uteroplacental apoplexy भनिन्छ। पहिलो पटक 1912 मा ए एस Couvelaire, फ्रान्सेली स्त्रीरोग विशेषज्ञ यस सिन्ड्रोम, लागि। त्यसैले नाम। को सिन्ड्रोम को लक्षण Kuvelera यो सिंड्रोम प्रकट प्रयास, फिक्री, वाकवाकी यस्तै हो जो कटि क्षेत्र मा तेजी बढ्दै दुःखले, योनी छुट्टी छैन बलियो निर्दय प्रकृति। यस अवस्थामा गर्न पनि heartbeats गुणस्तर परिवर्तन, अचानक र गंभीर भ्रूण आन्दोलन भरेको छ, अन्ततः तिनीहरूले ताल गुमाउन र शायद ट्याप। यो गर्भ मा भ्रूण असम्भव छ Palpate। साथै, अन्यत्र पनि गर्भाशय, जनन र को मांसपेशी मा आक्रान्त को परिणाम हो जो संवहनी सिस्टम, एक विषाक्त lesion छ। कारण खतरामा पार्ने जीवन रूपमा, hypovolemic आघात, atopic रक्तस्राव, sepsis अवस्था uteroplacental apoplexy एक गरीब पूर्वानुमान छ विकास को उच्च जोखिम छ। त्यसैले यो तत्काल सर्जिकल वितरण आवश्यक छ। नपुगी placental abruption को कारण सामान्यतया, यो सिंड्रोम विशेष गरी गर्भावस्था तीव्र भाइरल संक्रमण, कलेजो र हृदय समयमा सरुवा pyelonephritis, उच्च रक्तचाप, मधुमेह उपस्थिति, मा, गर्भवती महिलाको लेट gestosis को अवस्थामा विकसित। श्रम समयमा Kuvelera सिन्ड्रोम विकसित गर्दा fibromatous साइटहरु मा झिल्ली को लेट बिच्छेद, polyhydramnios को मामला मा पानी को तीव्र outpouring, पुरानो placental अपर्याप्तता, placental स्थान देखापर्यो जो diskoordinirovannoy श्रम, छोटो umbilical कर्ड, पेट आघात,। यस सिन्ड्रोम को रोकथाम चिकित्सा अवस्था र लेट gestosis संग गर्भवती महिला को सामयिक उपचार गर्न कम छ;
Sakura मनका कार्यशाला
बगैंचाहरूको र जापानी काठ को पार्क मा धेरै देख्यो - चेरी, यसको फूल को असाधारण सौन्दर्य भरेको छ जो गुलाबी फिक्का। तपाईं एक मनके चेरी रूख बनाउन भने तपाईं, तपाईंको घरमा जापान को एक टुक्रा ल्याउन सक्छ। यो बारम्बार एक monotonous काम गर्न आवश्यक छ किनकि साना रूखहरू निर्माण को आसानी तापनि, लगनशीलता र धैर्य हेरचाह गर्न तपाईं आवश्यकता हुनेछ यस्तो शिल्प बनाउन। तर प्रयास बर्बाद छैन: एक जापानी रूख आफ्नो घर को भित्री मा मधुर स्वर से फिट हुनेछ । शिल्प मनका - चेरी रूख: एक मास्टर वर्ग मनके गर्नुअघि Sakura निम्न सामाग्री तयार गर्न आवश्यक: तार;
स्तनपान लागि Poses
स्वभावैले सिर्जना स्तनपान को तंत्र, र नवजात को sucking सहज क्रिया मा आधारित छन्। तर, पोषण सुधार गर्न र अधिकतम दुवै लागि सान्त्वना प्राप्त गर्न - प्रशिक्षित गर्न आवश्यकता - आमा र बच्चा। खिला लागि सबैभन्दा सहज मुद्रा चयन गर्न विशेष उपयोगी हुनेछ। कसरी जन्मेका छाती खुवाउन?
दन्त fluorosis - पानी मा fluoride अधिकतम गर्न दिईने स्तर संग सम्बन्धित दाँत तामचीनी मा परिवर्तन,। Fluorosis दाँत संरचना र रंग emalnoy परिवर्तन संग सुरु। स्थिति दाँत noticeably बुरा, उनि abrasions तोड्न सक्छ। रोग को कारण रोग मात्र विशिष्ट इलाकों वा endemic छ कि केही व्यवसाय प्रतिनिधिहरु बीच नै प्रकट कसरी Fluorosis। Endemic fluorosis को कारण - पानी वा वातावरणमा फ्लोरीन अधिकतम अनुमति स्तर अधिक। , जम्मा यो पदार्थ, तामचीनी र हड्डी ऊतक नष्ट। क्षेत्रमा पानी मा fluoride को स्तर सेनेटरी र epidemiological स्टेशन मा पाउन सकिन्छ। अधिकतम स्तर - 1.
Ipomoea - बढ्दै
Ipomoea - एक चढाई कारखाना। कडा बढ्दै branching कारण बिहान महिमा गर्न उपयुक्त जलवायु3m को एक उचाइ गर्न मोटी कडा बाक्लो गलैँचा संग पलाउँछ जब। त्यसैले, यसको नाम रूपमा ग्रीक देखि translates "cherveopodobny।" सुन्दर हृदय आकारको पात र फूल, पार्क, उद्यान, Porches र घरहरू पनि पर्खाल सजाउनु बाड र छायांकन घाम ठाउँमा रूपमा सेवा गर्छन्। फूल आँखा-gramophones भन्दा फरक रंग गर्न खुसी तुल्याउने हो - सादा वा peephole संग गुलाबी, नीलो, चकलेट खैरो, बैजनी, सुन्तला, धारीदार, पनि multicolored छन्। बिहान महिमा को टेरी फारम छन्। तिनीहरूले सूर्यका धेरै संवेदनशील छन्, र त प्रारम्भ मा हरेक बिहान नयाँ खोलिएको फूल अवलोकन गर्न सकिन्छ, र खाने पछि उहाँले एक ट्यूब मा लुढका - fades। यो सुविधा लागि बोट "सुबह महिमा। - सुबह परी" nicknamed थियो त्यसपछि फूल देखि boll परिपक्व। कसरी सुबह महिमा बढ्न?
आफ्नै हातमा कफी खिलौने
कफी र भनिलाको खिलौने मजा शौक, तर पनि प्रेम र हेरविचार भरिएका छन् कि सजावट र मूल खिलौने को एक ठूलो तत्व मात्र हो needlewomen यो अविश्वसनीय लोकप्रिय आज। यो छिटो पर्याप्त, सजिलो र विशेष सीप आवश्यकता छैन किनभने यस्तो लोकप्रियता, व्याख्या गर्न सजिलो छ। ठूलो गन्ध कफी, दालचिनी र भनिलाको खिलौने - यो donee लामो यो अद्भुत सुगन्ध खुसी पार्न हुनेछ भन्ने सुन्दर उपहार । खिलौने को निर्माण को लागि सामाग्री तपाईं आफ्नो हात कफी खिलौने बनाउन सक्नुहुन्छ कसरी रुचि हो भने, तब यो एकदम बिट आवश्यकता थियो। पहिले, कपडा एक टुक्रा। राम्रो रंग राम्रो आफूलाई उधारो एक calico वा सनी लिन। तपाईं पनि स्टक फिलर, मात्रा र softness (sintepuh, hollofayber वा ऊन), सिलाई सामान, एक्रिलिक पेंट दिनेछु जो हात-बनाएको लेखमा आवश्यक छ। तपाईं तत्काल कफी दुई चमचा हरेक सानो सुगन्धित भनिलाको, दालचिनी एक चुटकी र सेतो गोंद को एक आधा चम्मच मिश्रण गर्नुपर्छ कफी खिलौने toning लागि एक विशेष समाधान तयार गर्न। यो मिश्रण पानी उम्लिरहेको को 50-75 एमएल भरिएको हुनुपर्छ, त्यसपछि सम्म सम्म राम्ररी हलचल। को चरण पहिले आधा मा folded गरिएको थियो जो कपडा, मा ढाँचा सार्न सुरु गर्न। त्यसपछि छाप sintepuh भरिएको हुनेछ जो माध्यम एउटा सानो प्वाल को पक्ष छोडेर एक बाटो मा खेलौना prostrochite। अतिरिक्त कपडा ट्रिम र कोनों मा एक निशान बनाउन। त्यसपछि यो खेलौना बारी र फिलर भर्न आवश्यक छ। एक सिउनी प्वाल लुक्ने सी। अर्को, समाधान तयारी र छाप स्पन्ज toning लागि माथि वर्णन नुस्खा। एक hairdryer संग राम्रो सुकाउने लागि, ताकि तपाईं कष्टप्रद समाधान जोगिन सक्छौं। त्यसपछि हात-बनाएको लेखमा मा पेन्सिलमा मार्क सबै रूपरेखा र रंग अगाडी बढन। अन्तमा, हामी कालो आकृति सबै तत्व बाहिर आकर्षित, र मार्च ट्याबमा आकर्षक किट्टी फूल को एक bouquet राखे। यो कफी खिलौने Primitives बनाउन एक मास्टर-वर्ग छ। तर, यो परिभाषा तिनीहरूले banal वा नीरस छन् भन्ने होइन। Primitives सृष्टि आसानी लागि भनिन्छ। !